3 Meelood oo laga Qaado Fasaxa Fasaxa 2015 si ay kuu Caawiyaan 2016 | Martech Zone
3 Ka-Qaadashada Xilliga Fasaxa ee 2015 si ay kaaga Caawiyaan 2016
Talaado, Febraayo 9, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Splender ayaa falanqeeyay in ka badan afar milyan oo macaamil ah 800 + goobood si loo arko sida dukaamaysiga internetka ee 2015 loo barbardhigo 2014. Maalinta Thanksgiving waxay ahayd maalintii seddexaad ee ugu dukaamaysiga badnayd ee internetka xilligan iyadoo kumbuyuutaro iyo korantada ay horseed u yihiin hadiyadaha laakiin dharka iyo agabyada horseedka u ah koritaanka. Cyber ​​Isniinta wali waa maalinta ugu badan ee fasaxa laga dukaameysto internetka, oo leh 6% iibka fasaxa. Si kastaba ha noqotee, iibku wuxuu hoos u dhacay 14% illaa 2014.
Fikradayda, waxaa jira dhowr waxyaalood oo laga qaato halkan:
Qorshaynta - Dukaameystayaashu waxay faafinayaan dhaqankooda iibsashada waxaana laga yaabaa inaysan ku sii socon safafka maalinta Jimcaha ah ee heshiisyada ah. Tafaariiqleyda iyo goobaha ganacsiga elektaroonigga ah waa inay eegaan fidinta waxyaabaha ay bixiyaan inta lagu jiro xilliga u horreeya ee Kirismaska.
Coordination - Isku-dubbaridka iibka khadka tooska ah iyo tafaariiqda, maraakiibta, soo qaadashada iyo soo noqoshada xilliga fasaxa ayaa kaxeyn kara iibsiyo badan oo khadka tooska ah ah ama dukaamada laga soo qaado. Haddii macaamiisha ay ogyihiin inay fududahay oo ay aamini karaan waqtiga gaarsiinta, iyagu way iibsan doonaan. Sanadahaan ku turunturoodo FedEx waxaa laga yaabaa inay dhaawacday kalsoonidaas.
Suuq- - labaduba waxay ubaahan yihiin suuq geyn adag sanadka 2016. Halkii diirada lasaari lahaa duqeynta buugaagta iyo waraaqaha iibka, waxaan aaminsanahay in tafaariiqleyda waaweyni ay ka caawin doonaan macaamiishooda iyo rajadooda inay qorsheeyaan xilliga, helaan heshiisyada ugufiican, kana caawiyaan isku dubaridka bixinta iyaga, iyo in la hubiyo in waqtigooda la gaarsiiyo.
Suuqyayaashu waa inay horay u sii qorsheeyaan waqti fara badan iyo qol loogu talo galay kacdoonka xilliga xilli-ciyaareedka. Haddii aadan haysan istiraatiijiyad dhamaadka xagaaga oo ku saabsan sida aad uga duwanaan karto dukaamaysigaaga fasaxa kuwa kula tartamaya, waxaa laga yaabaa inaad ciyaarta ka daahdo. Himiladaada maanta waa in la sii wadaa helitaanka macaamiisha iyo barnaamijyada soo degsada si aad u hesho dhagaystayaal aad u tiro badan oo suuq geynaya marka xilli ciyaareedku bilowdo. Markay tahay Maajo, waa inaad heysataa istiraatiijiyad xilliga la joogo.
Xogtan waxaa keenay Caato, ka bixiyaha ugu weyn barnaamijyada daacadnimada wax iibsiga ee shirkad ku saleysan Mareykanka.
Tags: 2014 iyo 20152015masiixigaduubka internetkafasax infographicisbeddellada dukaamaysiga fasaxaisbeddellada ciidahafidsanmahadnaqid
Douglas Karr Tuesday, February 9, 2016 Saturday, February 13, 2021
MainWP: Si Xun u Maaree Meelahaaga WordPress
Yoast SEO: URL-yada loo yaqaan 'Canonical URLs' ee ku yaal Goob leh ikhtiyaar SSL ah